केजरीवालमाथि किन निरन्तर भइरहेछ आक्रमण ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more केजरीवालमाथि किन निरन्तर भइरहेछ आक्रमण ?
एजेन्सी । पछिल्लो समय दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालमाथि विभिन्न आक्रमणका प्रयासहरु भइरहेका छन् । उनिमाथि खुर्सानीको धुलो प्रहार गर्नेदेखि ढुंगा हान्नेसम्मका आक्रमण भएका छन् । पछिल्लो घटनाको रुपमा गत मई ४ मा एक सडक र्यालीका क्रममा एक युवकले केजरीवालमाथि थप्पड हाने ।
दिल्लीको मोतिनगर इलाकामा चलिरहेको र्यालीका क्रममा केजरीवालमाथि थप्पड हानिएको थियो । सुरेश नामका युवकले केजरीवालमाथि थप्पड हानेका थिए । भाजपाको निर्देशनमा युवकले थप्पड हानेको आम आद्मी पार्टीले मिडियामा सार्वजनिक गरेको छ ।
श्रृंखलाबद्ध भइरहेका यस्ता घटना
दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालमाथि बेला–बेला विभिन्न खालका आक्रमणहरु भइरहेका छन् । गत वर्ष नोभेम्बरमा दिल्ली सचिवालयमै उनिमाथि खुर्सानीको धुलोबाट आक्रमण भएको थियो । २०१६ अप्रिलमा पत्रकारसम्मेलनका बीच दिल्ली सचिवालमै उनिमाथि जुत्ता प्रहार भएको थियो ।
खुर्सानीको धुलोबाटै आक्रमण
गत नोभेम्बरमा दिल्ली सचिवालय भित्रै केजरीवालमाथि खर्सानीको धुलो प्रहार भएको थियो । सचिवालयबाट निक्लदैं गर्दा एक अनिल शर्मा नामको व्यक्तिले केजरीवालमाथि खुर्सानीको धुलो प्रहार गरेका थिए । आक्रमण गर्ने अनिल शर्मा केहि समस्याको पुलिन्दा बनाएर केजरीवाललाई भेट्न आएको बहानामा थिए । त्यसबखत ति व्यक्तिको समस्याबारे बुझ्न केजरीवाल रोकिए । तर ति व्यक्तिले एक्कासी केजरीवालमाथि खुर्सानीको धुलोबाट आक्रमण गरे । खुर्सानीको धुलोबाट केजरीवालको आँखामा समस्या आएको थियो ।
लुधियानामा गाडीमाथि नै हमला
फरबरी २०१६ मा पन्जाबको लुधियानामा अरबिन्द केजरीवालको कारमाथि केहि मानिसहरुले आक्रमण गरेका थिए । उनिमाथि सामुहिक रुपमा रड र डण्डा प्रहार भएको थियो । त्यसबखत उनलाई केहि नभए पनि गाडीको सबै सिसा भने फुटेको थियो ।
मसिको डिब्बा प्रहार
जनवरी, २०१६ मा दिल्ली छत्रसाल स्टेडियममा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री अरविंद केजरीवालमाथि मसिको डिब्बा फ्याँकिएको थियो । मुख्यमन्त्री जब सभालाई सम्बोधन गर्न मन्चमा पुगेका थिए, त्यसबखत नारा लगाउँदै एक महिलाले मसिको डिब्बा प्रहार गरेकी थिइन् ।
२०१४ को चुनाव र्यालीमा धेरैपटक आक्रमण
२०१४ मा भएको विभिन्न चुनावी र्यालीहरुमा अरविन्द केजरीवालमाथि धेरैपटक आक्रमण भयो । उनिमाथि ढुंगा, अण्डा, लाठीलगायतका सामाग्रीहरुले पटक–पटक आक्रमण भयो । २६ डिसेम्बरमा दिल्लीमा भएको एक र्यालीका क्रममा उनिमाथि थुप्रै अण्डाहरु वर्षाइएको थियो । केजरीवाललाई चुनावी र्यालीको क्रममा एक अटो ड्राईभरले थप्पड हानेको विषय त्यतिखेर चर्चामा आएको थियो ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा निक्लने वित्तिकै केजरीवालमाथि अनेकन आक्रमणका प्रयासहरु भइरहेका छन् । भ्रष्टचार र अनियमितताको चर्को विरोधीको रुपमा रहेका केजरीवालमाथि कसले आक्रमण गरेको अहिलेसम्म स्पष्ट त भएको छैन तथापी अहिलेसम्म आक्रमणमा कहिं कतै भाजपा जोडिने गरेको छ । आम आद्मी पार्टी पनि पटक–पटक हुने यस्ता आक्रमणको पछाडि भारतीय जनता पार्टीलाई दोष दिंदै आएको छ ।
बैशाख २७ गते, २०७६ - १३:२७ मा प्रकाशित